Usuku lukaMama eRashiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Usuku lukaMama eRashiya
Umfanekiso | I-Pixabay
Usuku lukaMama yiholide ekhethekileyo ebhiyozelwa kwihlabathi liphela ukukhumbula bonke oomama kwaye banike umbulelo ngothando kunye nokhuselo abalunika abantwana babo kwasekuzalweni.
Njengombhiyozo wamazwe aphesheya, kwilizwe ngalinye ibhiyozelwa ngeentsuku ezahlukeneyo, nangona eyona nto ibalulekileyo iyiCawa yesibini ngoMeyi. Nangona kunjalo, uSuku loMama eRashiya lwenzeka ngolunye usuku. Ngaba ungathanda ukwazi ukuba ibhiyozelwa njani kweli lizwe?
1 Lunjani usuku loomama eRashiya?
2 Yimvelaphi yoMhla woMama?
3 Ugujwa nini uSuku loMama kwamanye amazwe?
3.1 EUnited States
3.7 EUnited Kingdom
3.8 IPortugal neSpain
Lunjani usuku loomama eRashiya?
Usuku lukaMama eRashiya lwaqala ukubhiyozelwa ngo-1998, xa lwamkelwa ngumthetho phantsi koorhulumente baseBorís Yeltsin. Ukusukela ngoko ibibanjwa ngeCawe yokugqibela kaNovemba rhoqo ngonyaka.
Kuba lo ngumbhiyozo omtsha eRashiya, akukho zithethe zimiselweyo kwaye usapho ngalunye lubhiyozela ngendlela yalo. Nangona kunjalo, abantwana benza amakhadi ezipho kunye nezinto ezenziwe ngezandla zokubulela oomama babo ngothando lwabo kwaye baveze iimvakalelo zabo.
Abanye abantu benza isidlo sangokuhlwa sosapho apho banika oomama isipha esihle seentyatyambo zesintu njengophawu lombulelo wabo, ehamba nomyalezo wothando.
Ngayiphi na imeko, injongo yoSuku loMama eRashiya kukukhuthaza amaxabiso osapho kunye nentsingiselo enzulu yokuthanda koomama ngabantwana babo kunye nokunye.
Yimvelaphi yoMhla woMama?
Singayifumana imvelaphi yoMhla woMama kwiGrisi yakudala ngaphezulu kweminyaka engama-3.000 XNUMX eyadlulayo xa kwakubanjwa imibhiyozo kuzukiswa uRea, Umama wootanic woothixo obaluleke njengoZeus, iHadesi kunye noPoseidon.
Ibali likaRea lisixelela ukuba wambulala owakhe umyeni uCronos ukukhusela ubomi bonyana wakhe uZeus, kuba wayebadlile abantwana bakhe bangaphambili ukuze angabhukuqwa etroneni njengoko wenzayo kuyise u-Uranus.
Ukuthintela uCronos ekutyeni uZeus, uRea waqulunqa isicwangciso kwaye wafihla ilitye kunye neephepha ukuze umyeni wakhe azidle, ekholelwa ukuba ngunyana wakhe ngelixa wayekhula kwisiqithi saseKrete. Xa uZeus eba mdala, uRea wakwazi ukwenza uCronus ukuba asele isiselo esenza ukuba abanye abantwana bakhe bagabhe.
Ngothando awalubonisa abantwana bakhe, amaGrike amnika imbeko. Emva kwexesha, xa amaRoma ethatha oothixo bamaGrike nawo amkela lo mbhiyozo kwaye phakathi kwinyanga yoKwindla kwenziwa iminikelo kangangeentsuku ezintathu kwisithixokazi uHilaria kwitempile yaseCibeles eRoma (emele uMhlaba).
Emva kwexesha, amaKristu ayiguqula le holide inemvelaphi yobuhedeni ayenza eyahlukileyo ukuhlonipha iNtombikazi enguMariya, umama kaKrestu. Kwiingcwele zamaKatolika ngoDisemba 8 kubhiyozelwa i-Immaculate Conception, umhla owamkelwa ngaba bathembekileyo ukukhumbula uSuku loMama.
Sele kwinkulungwane yama-1914, umongameli wase-United States uWoodrow Wilson wabhengeza ngo-XNUMX ngeCawa yesibini ka-Meyi njengoSuku loMama olusemthethweni, isenzo esachazwa kwamanye amazwe amaninzi ehlabathi. Nangona kunjalo, amanye amazwe anesiko lamaKatolika aqhubeka nokugcina iholide ngoDisemba nangona iSpain yahlulahlula ukuba ihambise kwiCawa yokuqala ngoMeyi.
Ugujwa nini uSuku loMama kwamanye amazwe?
Eli lizwe libhiyozela uSuku loMama ngeCawa yesibini ngeCanzibe. Abokuqala ukuyenza ngale ndlela siyaziyo ukuba yayingu-Anna Jarvis ngokuhlonipha umama wakhe ongasekhoyo ngoMeyi 1908 eVirginia. Emva kwexesha wenza iphulo lokuseka uSuku loMama njengeholide yesizwe e-United States kwaye ke yabhengezwa ngo-1910 eWest Virginia. Emva koko amanye amazwe anokulandela ngokukhawuleza.
E-France, uSuku loMama sisiko lakutshanje, kuba laqala ukubhiyozelwa kwiminyaka ye-XNUMX. Ngaphambi koko, kwiintsuku ezithile iinzame zabasetyhini abathile ababelekise inani elikhulu labantwana ukunceda ukubuyisela inani labemi elizweni emva kweMfazwe Enkulu laqatshelwa laze lanikwa iimbasa zokufaneleka.
Okwangoku ibhiyozelwa ngeCawa yokugqibela ngoMeyi ngaphandle kokuba ihambelana nePentekoste. Ukuba kunjalo, uSuku loMama lwenzeka ngeCawa yokuqala ngoJuni. Nokuba ngowuphi umhla, kuyinto yesiko ukuba abantwana banike oomama ikeyiki emile okwentyatyambo.
Kweli lizwe laseAsia, uSuku loMama lukwangumbhiyozo omtsha, kodwa baya besanda abantu baseTshayina babhiyozela iCawa yesibini ngoMeyi ngezipho kunye novuyo oluninzi noonina.
Usuku lukaMama lukhunjulwa eMexico ngenzondelelo enkulu kwaye ngumhla obalulekileyo. Umbhiyozo uqala ngosuku olungaphambi kwalolo xa kulisiko ukuba abantwana babambe oomama okanye oomakhulu babo, ngokwabo okanye ngokuqesha iinkonzo zeemvumi eziqeqeshiweyo.
Ngosuku olulandelayo kuqhutywa inkonzo ekhethekileyo yecawa kwaye abantwana banika oomama babo izipho ababenzele zona esikolweni.
UKumkanikazi uMama waseThailand, ubungangamsha bakhe uSirikit, naye uthathwa njengomama wabo bonke abantu baseThai urhulumente weli lizwe ubhiyozele uSuku loMama ngomhla wokuzalwa kwakhe (nge-12 ka-Agasti) ukusukela ngo-1976. Yiholide yesizwe ebhiyozelwa ngesitayile kunye nezomlilo kunye namakhandlela amaninzi.
Usuku lukaMama eJapan lwafumana ukuthandwa kakhulu emva kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kwaye ngoku kubhiyozelwa ngeCawa yesibini ngoMeyi.
Le holide ihlala ngendlela yasekhaya neyesiko. Ngokwesiqhelo abantwana bazoba imifanekiso yoomama babo, balungise izitya abaye babafundisa ukuba bazipheke kwaye babanike nepinki okanye ii-carnations ezibomvu njengoko zibonisa ubunyulu nobumnandi.
Usuku lukaMama e-UK yenye yeholide ezindala eYurophu. Ngenkulungwane ye-XNUMX, ngeCawa yesine yeLente yayibizwa ngokuba yiCawa yamaMama ukuhlonipha iNtombikazi enguMariya. kwaye iintsapho zithathe ithuba lokudibana, ziye kwimisa kwaye zichithe usuku kunye.
Ngolu suku lukhethekileyo, abantwana balungiselela oomama babo izipho ezahlukeneyo kodwa kukho enye engenakuphoswa kwaye yiSimnel Cake, ikeyiki yeziqhamo emnandi enamaleko e-almond ngaphezulu.
Kuzo zombini iSpeyin nePortugal, uSuku loMama lwaludla ngokubhiyozelwa nge-8 kaDisemba kumsitho we-Immaculate Conception kodwa ekugqibeleni yahlulwa kwaye le mibhiyozo mibini yahlulwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Usuku lukaMama eRashiya
Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia?